Apple က Mac OS X ကို 10.9.3 to feature 'Retina' 4K display တွေအဘို့ mode ကို - သတင်း Rule
Apple က Mac OS X ကို 10.9.3 '' Retina feature ရန်’ 4K display တွေအဘို့ mode ကို
Apple က OS X Mountain Lion
Software Development ကို Apple က၎င်း၏က Mac OS X Mavericks သလိုပဲစတင်ခဲ့သည် 10.9.3 developer များမှ beta ကို, အရာသတင်းများအရတစ်ဦး 4K Display ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတို့အဘို့စိတ်ဝင်စားစရာလွှတ်ပေးရေးဖြစ်လိမ့်မည်.
Apple ရဲ့လွှတ်ပေးရန်မှတ်စုအတွက်ထုတ်ဖော်မပေးပေမယ့်, 9Mac OS X မှာကြောင်း to5Mac ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ် 10.9.3 တစ်ဦး 4K display ကို၎င်းတို့၏ Macbook တက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့ထောက်ခံမှုကယ်တင်တတ်၏.
Mac OS X ကိုအပြေး Macbook ပိုင်ရှင်တွေ 10.9.3 သူတို့ရဲ့ 4K တစ် pixel-နှစ်ဆ '' Retina မှာ operating system ကို run ဖို့ကိုဖော်ပြပေးမသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်’ resolution ကို, အဆိုပါပိုကြီး screen ပေါ်မှာအများကြီးပြတ်သားအကြောင်းအရာအတွက်ရရှိလာတဲ့. ဒီ update ကိုခင်မှာ, အဆိုပါ Macbook ကနေ content တွေကိုဖြန့်ပြတင်းပေါက်ဒြပ်စင်များနှင့်သာပိုကြီးတဲ့စကေးမှာတက်ပြသကြပါလိမ့်မယ်.
ပိုပြီးင်အဘယျသို့, ဆော့ဖ်ဝဲ update ကို – အရာဖြစ်နိုင်ဖွယ်သေးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်များအတွက်ဖြန့်ချိမည်မဟုတ်ပါ – အဆိုပါခွင့်ပြု Retina Display ပါ Macbook Pro ကို 60Hz တစ် Refresh Rate ကိုအတူ 4K display ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်, ဖြစ်နိုင်ဖွယ် display ကို 24Hz သို့မဟုတ် 30Hz ၏ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းထားများမှာ output ကိုနှိုင်းယှဉ်တာချောမွေ့ကြည့်ရှုစေမည်ဖြစ်သော.
9to5Mac သစ်ကို feauture တစ်လှည့်ဖျားကိုပေး၏, နိဂုံးချုပ်, “ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ 4K Seiki မှ Retina Display ပါနဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်-2013 MacBook Pro နှင့်ချိတ်ဆက် HDMI. OS X ကို pixel-နှစ်ဆယ့် 4K display ပေါ်မှာ run နေ content တွေကိုအရင်ကထက်အများကြီးပြတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. ဒါဟာစံ Retina resolution ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုသို့မဟုတ် Retina iPhone, iPad ကို အသုံးပြု. အဖြစ် Retina MacBook Pro ကိုပြေးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။”
ဒါကသတင်းကိုလည်း Apple ကဒီနှစ်တစ်ချိန်ချိန်တစ် 4K resolution display ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုဟန်, ကုမ္ပဏီကလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာသေးပါဘူးပေမယ့်. ကောလာဟလများအရ, သို့သော်, ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ် “high resolution ကတော့ကို standalone ပြသမှု”.
20210	1 4K သည် resolution ကို, 9to5Mac, ပန်းသီး, Mac OS နဲ့, MacBook Pro, ပါ Macintosh, OS X ကို, Retina
← မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ကိုထမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှုံး 239 လူထု Sevastopol, ရုရှားဘုန်းအသမြင်ကွင်း, '' အိမ်သို့သွားလော့စိတ်အားထက်သန်’ →